के गरिदैछ हजुर ? | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / के गरिदैछ हजुर ?
के गरिदैछ हजुर ?
Posted by: युगबोध in विचार December 5, 2018	0 130 Views
– सरकारले स्पष्टरुपमा हिन्दू धर्म विरो धी चरित्र समे त दे खाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो , किनकि त्यो संविधानमा उल्लेखित ‘धर्म निरपे क्षता’ को भावनाविपरीत जान्छ । विश्व हिन्दू महासंघले प्रधानमन्त्री ओ लीद्वारा शंकराचार्य (पुरी) को अपमान र ‘युनिफिके सन चर्च’ सग आबद्ध संस्थाहरुको सम्मानमा राजकीय भो ज अनि एसिया प्यासे फिक समिटमा सरकारको पूर्ण संलग्नताले धार्मिक ध्रुवीकरणको खतरासम्म बढ्ने चे तावनी दिएको छ ।
वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे , दे शसञ्चार
– प्रधानमन्त्रीज्यू, यो सम्मान हो इन, अपमान हो , तपाई हामी सबै को प्रधानमन्त्री– जसले जे पुरस् कार दियो , त्यसै का लागि शिर नुहाउने ? धर्म प्रचारकले दिएको पुरस् कार थाप्ने ? खराब ने तृत्व र कुशासनका लागि यतिबिघ्न आलो चना हु“दा ‘ने तृत्व र सुशासन पुरस् कार’ लिन अफ्टे रो लागे न ?
विवे कशील साझा पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्र ट्वीटरमा ।
– विगत के ही दिनमा ने ताहरुको सांस् कृतिक अधपतन र नग्नताको जुन राष्ट्रिय परे ड प्रदर्शन भयो त्यसको मूल्य यस मुलुकका सन्तान दरसन्तानले लामो समयसम्म तिनुपनेर् छ ।
ने कपाका ने ता घनश्याम भुसाल ट्वीटरमा ।
– अब राजनीति सफा गनेर् आन्दो लन चलाऔ ं । ने कपाका ने ता नारायणकाजी श्रे ष्ठ ‘प्रकाश’ अनलाइन खबर ।
कहा जान खो जे का हामी, पुग्दै छौ ं कहा ? हुदै छ, गरिदै छ के ? उल्ले खित विचारले प्रष्ट पारे कै छन् । तथापि सबै सकियो भन्ने है न । सुधारको प्रयास जारी राख्नै पर्छ । विकल्पहरु धे रै हुनसक्लान् । तर वर्गसंघर्षको भठ्ठीमा खारिएको ने कपाको ने तृत्व यसरी विदे शी धर्म प्रचारक संस् थाप्रति आभारी भएको दे ख्दा अचम्म मान्ने को अभाव छै न । हनुमानहरुले आफै अनुमान गरुन् । घनश्याम भुसालका शब्दमा ‘सांस् कृतिक अधपतन र नग्नताको परे ड प्रदर्शन’ धे रै गम्भीर प्रश्न र पश्चाताप दुबै हो  । राजनीति सफा गनेर् आन्दो लनको आवश्यकताबो ध र आव्हवान स् वीकारो क्ति हो नारायणकाजी श्रे ष्ठ ‘प्रकाश’ को  । बाहिरका आलो चकस“ग बम्कनुपदैर् न अब कुनै भिजिलान्ते ले  । गणतन्त्रका अगुवा डा. दे वे न्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडी किंकर्तब्यविमूढजस् तै भएका छन् । यो भन्दा बढी अरु के हुनुपर्छ र ?
सत्ताले दिने शक्ति र शक्तिले जन्माउने उन्मादको अवशान दर्दनाक नभए हुन्थ्यो  । यति शक्तिशाली र ऐ तिहासिक जिम्मे वारी बो के को सरकारको नाकको टुप्पो १३ वर्षीया दिवङ्गत बालिका निर्मला पन्तले काटिदिएकी छन् । त्यसै ले सरकार र पुलिसले निर्मला पन्तको नाम सुन्न र तस् िवर समे त दे ख्न सक्दै न, च्यात्छ । टा“स् ने लाई पक्रन्छ । थाहा छै न यस् तो अवस् थामा सुशासन र समृद्धितिर लम्के को लो कतन्त्र कसरी फक्रन्छ ?
जब मन्त्रीहरुले सुशासन र समृद्धिको भाषण छाटिरहे का हुन्छन्, तब किनारमा रहे को कुनै एउटा विरो धी दर्शक वा श्रो ताले निर्मला पन्तको फो टो सहितको पो ष्टर प्रदर्शन गरिदिए पुग्छ जवाफ । त्यसपछि त्यहीं शुरु हुन्छ महाभारत † निर्मलाको भूतले तसेर्को सरकार कसरी वर्षिन्छ, दे ख्न पाइन्छ ।
‘निन्दक नियरे रखिए आगन कुटी छवावे , बिनपानी साबुनबिना निर्मल करे सुहाए’ सन्त कबीरको अमृतबाणी विषसमान भएको छ अचे ल । प्रशंसाले बिगारे को बानीले आलो चना पचाउनै सक्दै न । कम्युनिष्ट पार्टीका विभिन्न कमिटीका बै ठकको अन्त्यमा आलो चना र आत्मालो चना गर्ने चलनको अवशानको औ चित्य पुष्टि हुदै छ बल्ल । मान्छे विगार्न कति सजिलो रहे छ त्यो अस् त्र । बस्त्रहीन हुनै पदैर् न । आफै नाङ्गिदो रहे छ सजिलै  । त्यसै ले सम्मानित राष्ट्रपतिका जीवनशै लीका बारे मा टिप्पणी हुन थाले का छन् । दुःखद हो त्यो  । तथापि जुन मदन भण्डारीले राजालाई प्रजा बन्न ललकाथेर् , उनै की जीवनसंगिनीको जीवनशै ली वडामहारानीको भन्दा पनि चकोर् भयो भन्ने अवसर आलो चकलाई नदिएकै राम्रो  । आगे सरकारको जो विचार !
निर्मला पन्तको फो टो हटाएर प्रधानमन्त्रीको फो टो टास्ने प्रतिस्पर्धा पतनो न्मुख प्रवृत्ति र संस्कृतिको द्यो तक हो  । अरु दृष्टान्त धे रै दिएका छन् युवराज घिमिरे ले आफ्नो शून्य समयको आले खमा । सबै धर्म र विचारप्रति समभाव राख्न सके को भए हुन्थ्यो सरकारले  । कसै लाई काखा र कसै लाई पाखा पार्न खो ज्दा पाखा परे को वा पारिएकाले विद्रो ह गनेर् वातावरण बन्छ । धार्मिक द्वन्द्वको निम्तो आफै मा धे रै महंगो पर्न सक्छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनमत हिन्दू भएको मुलुकमा थो परिएको धर्म निरपे क्षता र बढाइएको धर्म परिवर्तनको लहर आफै जहर बने को छ । विदे शी गुरुआमाबाट आशीर्वाद लिन रहर गनेर् हरुले स्वदे शकै अरु कुनै गुरुआमासग आशीर्वाद लिन गएको भए आक्रो श बढ्ने थिएन समाजमा । लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, स् वर्गद्वारी, खप्तड, पाथीभारा, जनकपुर आदि मठ मन्दिरमा गएर दीक्षित हुन कसले छे के को थियो र ? प्रशंसा र पुरस् कारको आकार र प्रकार जति नै ठूलो किन नहो स्, क्षणिक आनन्द र खुशीमा दीर्घकालीन दुस् प्रभाव पनेर् काम गनैर् हु“दै नथ्यो  । त्यसै ले घनश्याम भुसालले भन्नुप¥यो – सांस् कृतिक अधपतन र नग्नताको जुन राष्ट्रिय परे ड प्रदर्शन भयो त्यसको मूल्य यस मुलुकका सन्तान दरसन्तानले लामो समयसम्म तिनुपनेर् छ ।’
पार्टी र कार्यकर्ताले पनि तबसम्म काध थाप्ने हुन्, जबसम्म उनीहरुको का“ध गल्दै न र ढल्दै न । आफै ढल्ने अवस् था आए काम चल्दै न । धे रै ठूला साम्राज्य समाप्त भए सुधारका लागि सक्रिय नहु“दा । अहंकार आफै भित्र रहे को मन्दविष हो  । त्यसै लाई क्रियाशील बनाउन रामभक्त हनुमानको अन्धभक्तिले उत्प्रे रित गर्छ । भक्तको भजन र आरतीमा मगन हुने राजा महाराजाका सत्ता ढाल्न विरो धीको प्रहारभन्दा बढी सत्तान्धताका आकार र प्रकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे का थिए हिजो  । आज अकोर् तरीकाले प्रयो ग हुन सक्छ । सबै को ‘प्रयो गशाला’मा औ जार धे रै छन् । ने कपाका ने ताहरु औ जारको अवतारमा प्रस् तुत नभएका भए हुन्थ्यो भन्ने शुभचिन्तक खिन्न भए । आफ्नै आमाको अपमान गरे र विदे शी आमाको आशीर्वाद थाप्न मरिहत्ते गरे को दे खे र । कुन्नि किन पुगे हो लान् त्यसरी टाउकाले टे के र । यदि यो दुनिया“मा कतै स् वर्ग नामको ठाउ“ भए, दिवङ्गत आत्माले कतै बसे र हे र्न सक्ने भए, कार्ल माक्र्स र मदन भण्डारीका आत्माले ने पाली कम्युनिष्ट सरकार र ने ताको चर्तिकला हे रे र के भन्थे हो ला ह ?
धे रै आश गरे को , भर परे को र प्रिय वस् तु बिग्रे को दे ख्दा चिन्तित हुनु स् वाभाविकै हो  । युवराज घिमिरे र रविन्द्र मिश्रको चिन्ता र चासो भन्दा घनश्याम भुसाल र नारायणकाजी श्रे ष्ठ ‘प्रकाश’ को चिन्ता र चासो मा भिन्नता छ । पीडामा पनि अन्तर छ । सो ही अनुसारका शब्द चयन भएका छन् । सत्ता र भत्ताको चास् नीमा डुबे का झि“गालाई झिजो लागे को हुनसक्छ । सो चून् र बुझून् समय छ“दै के ही गरुन् । डलरका पछि नदगुरुन् । धनले बिगारे को मन र प्रशंसा र पुरस् कार खो ज्दै हि“ड्ने तन सम्हालून् । पुलिस र से नाको पहरामा सुरक्षित हुने भए राजा वीरे न्द्रको बंश बिनाश हुने थिएन । असुरक्षा र आक्रो श नबढाउन्, सत्ता, शक्ति र व्यक्तिको  ।
पा“च वषेर् कार्यकाल कसै ले पूरा गरे नन्, ०७ सालदे खि अहिले सम्मका सरकारले  । त्यसै ले पूरा गरे र दे खाउन चुनौ ती दिएका छन् कृष्ण पहाडीले  । यतिधे रै जनमतप्राप्त र शक्तिशाली सरकारको आयु १८ महिना र दुई वर्ष तो क्ने हरु जीवितै छन् । विपि को इरालाको सरकार ढलाएको तत्व पनि छ । के हुन्छ ? भविष्यकै गर्भमा छ । एक वर्ष नपुग्दै यसरी ह्वाङ्गै र उदाङ्गै हो ला भने र त विरो धीले पनि चिताएका थिएनन् । सत्ता र भत्ताले मै मत्त भएकाहरुले नदे ख्नु स् वाभाविकै हो , किनारमा बसे र हे रे काहरु पनि अन्यो लमा परे का छन् । कहाको माक्र्सवाद र बहुदलीय जनवाद, अनि कहा“बाट प्राप्त हु“दो रहे छ आशीर्वाद र कसरी पुगिने रहे छ समाजवादमा भने र । जनयुद्धलाई पौ राणिक धर्मयुद्धजस् तै ठाने र एकबारको जुनी र जीवन अर्पण गरे का शहीदका सपनाको ब्यापार भएको दे ख्ने जमातले विकल्पमा विप्लवको बाटो रो ज्ने अवसर दिइदै छ एकातिर भने अकोर् तिर हिन्दूहरुलाई सरकारका विरुद्ध जाग्न र लाग्न निम्त्याइदै छ । यो के गरिदै छ हजुर ?
Previous: नयाँ युगबोधदेखि स्तम्भकारसम्म
Next: सरकार भेटियो न्याय भेटिएन
संसदीय अभ्यासमा अनुसन्धान
आमाहरु हाँस्नु भयो, मैले गल्ती गरेको सम्झिए
निर्वाचित जनप्रतिनिधिका दुई वर्ष